Simba remagetsi kumhanyisa mota yemagetsi pamusoro pemakore gumi ingangoita zvakapetwa makumi matatu mutengo wekutanga wekutenga. Nesimba rekushandisa zvine chekuita nehukuru hwakawanda hwehupenyu hwese, Marek Lukaszczyk wemota uye dhiraivha dhizaini, WEG, inotsanangura nzira shanu dzekuvandudza magetsi simba. Th ...
Iyo yazvino vhezheni ye2020 yemusika wekudzidza paAsynchronous Motor Market inosanganisira 103 nemusika wedata Matafura, maChati, maGirafu, uye maFigure ayo ari nyore kunzwisisa nekuratidzwa kwakadzama-kwakadzika kuongorora. Iyo Coronavirus Pandemic (COVID-19) yakanganisa mativi ese ehupenyu pasirese. Izvi zvine ...
Zhejiang Lijiu Motor Co, Ltd. (ino inonzi "Zhejiang Lijiu Motor") iri muTaizhou, Zhejiang, chivako chehupfumi hwenyika. Kuvimba nedenderedzwa hombe rehupfumi reYangtze Rwizi Delta, iyo nharaunda nzvimbo yakapfuura. Izvo chete 2 ...